एसएलसीमा थर्ड र बोर्ड थर्ड मेसो नपाउँदा झण्डै बेहोस भएका डाक्टर बुद्धि बहादुर थापा | Jukson
अहिले तपाई मोवाईलमा आफ्नो वा आफन्तको एसईईको सिम्बोल नम्वर ईनटरनेटको माध्यमवाट कुन ग्रेडमा आयो भनेर खोज्दै हुनुहुन्छ वा फेसवुकमा पोष्ट गर्दै हुनुहुन्छ । अनुमान लगाउनुहोस् त यदि ईनटरनेट नभएको भए ? तपाईले कतिवेला थाहा पाउनुहुन्थ्यो होला है तपाँईको एसईईको नतिजा ?
एसईई वा एसएलसी भन्ने वित्तिकै को पहिलो भयो होला भन्ने कुरा त दिमागमा आईनै हाल्छ । ती मध्येमा तपाईले सम्झने नामहरु नी ? यसमा भने कसैको दुई मत नै छैन डाक्टर बाबुराम भट्राई, स्वर्गीय डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा र डाक्टर बुद्धि बहादुर थापा ।
अनि तपाईलाई थाहा छ, ती तीनै जना गण्डकी प्रदेशकै विद्यार्थी हुन् । बावुराम भट्राई, स्वर्गीय डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा गोर्खाका अनि डाक्टर बुुद्धि बहादुर थापा तनहुका । अर्को पनि कस्तो संजोग तीनै जना लगभग एउटै समयका विद्यार्थीहरु पनि ।
नेपालका अहिलेका सवैभन्दा राम्रा फिजिसियन डाक्टर बुद्धि बहादुर थापाले २०२९ सालमा तनहुँको खैरेनी माध्यमिक विद्यालयवाट एसएलसी दिए र वोर्ड थर्ड भए । तर अचम्म उनी रिजल्ट आउँदाको दिनमा बिहानै देखि गाई चराउन जंगल गएका थिए । उनि भन्छन्–“हाम्रो बेलामा रिजल्ट थाहा पाउन कि त विहान कि त वेलुकी सात बजेको रेडियो नेपालको समाचार सुन्नुपथ्र्यो कि भने एक हप्ता पछि आउने गोर्खापत्र हेर्नुपथ्र्यो ।”
उनी विगत सम्झदै भन्छन्– म गाई चराएर बेलुकी पाँच बजे घर फर्कदै गर्दा चौतारोमा मेला गएका पनि फर्केका रहेछन् अनि मेरा स्कुलका गुरु पनि मलाई हतार हतार आएर भन्नुभयो– तिमी त थर्ड भएछौं । म छाँगावाट खसे जस्तो भए परिक्षा त राम्रै गरेको हो, कसरी थर्ड डिभिजन आयो भनेर जब मेरो कुरा गुरुले थाहा पाउनु भयो अनि मलाई प्रष्ट पार्दै भन्नुभयो तिमी बोर्ड थर्ड भएछौ ल वधाई छ , यो भेगकै ईज्जत राख्यौ । मलाई के गरौ र कसो गरौ भयो त्यति राम्रो हुने गरित लेखेको थिईन मेरो परिक्षामा केहि टेक्निकल समस्या भएको थियो ।
अहिलेको परिक्षा प्रणाली सम्झदै उनि भन्छन त्यति बेला फलामे ढोका भनेर आफैंमा ब्राण्ड बनेको एसएलसी आज भोली नाम परिवर्तन भएर एसईई नामाकरण भएको छ । महत्व एउटै छ तर पनि त्यसको मानसिक प्रभाव भने फरक छ । कारण उ बेला एसएलसी पास हुदाँ गाउँमा बैठक बसेर अव के भर्ने वारेमा छलफल हुन्थ्यो अहिले भने सामान्य फेसबुकमा हाल्यो लाईक र कमेन्टमा रमायो ।
बोर्ड थर्ड भए पछि मैले गाँउमा चक्लेट बाडे तर सवैले मलाई रेडियो बाट नाम आएकोले बाडेको हो भने कारण उनिहरुलाई एसएलसीका बारेमा राम्ररी ज्ञान नै थिएन । त्यो समयमा नजिता हेर्न एक हप्तामा आउने गोरखापत्र कुर्नुपथ्र्यो । तर रेडियो नेपालले बिहान र बेलुकी भन्ने समाचारमा बोर्ड थर्ड सम्मको नाम भन्थ्यो । मेरो नाम पनि रेडियो नेपालको समाचारमा आएकाले चकलेट बाडेको भनेर गाउँमा हल्ला नै भयो ।
प्रविधिले सहज बनाएको छ तर पनि यसमा आत्मियता भेट्न भने समस्या छ । मैले अहिले जे पेशा मा सेवा गरेको छु यो मैले चाहेर मात्रै गरेको होईन त्यति बेला गणितमा जान्ने हुनेले ईन्जिनियर र विज्ञानमा जान्ने हुनेले जिव विज्ञान पढेर डक्टर बन्नुपर्छ भन्ने चलन नै थियो ।
बावुराम भट्राईको ईतिहास पनि सम्झदै भने–“ बाबुराम पनि ईन्जिनियर पढ्न चाहेका थिएनन तर उनि पनि गणितमा राम्रो भएकाले बाध्यताले आर्केटेक्चर ईन्जिनियर वने म पनि त्यस्तै हो ।” मेरो एसएलसीको नतिजा पश्चात स्कुलमा बैठक नै वसेर मलाई डक्टर पढ्न अनुरोध गरियो त्यहि अनुसार मैले डक्टर पढे । त्यसैले आज पनि मैले मेरो गाउँलाई भुलेको छैन र यहाँको माटोमा रमाई रहेको छु ।
पढ्नु भनेको प्रथम हुनु मात्रै होईन योग्य हुनु हो । अहिले प्रतिस्पर्धा चल्छ कसको छोरोले बढी नम्बर ल्यायो भनेर उनि विगत सम्झदै भन्छन म पहिला हुनका लागि कहिल्यै पढिन मात्रै योग्य हुनका लागि पढे । घरवाट स्कुल पुग्न लगभग २ घण्टा लाग्थ्यो ।
स्कुल जादा खेतमा पानी लगाउनु पर्ने, अहिले जस्तो सहज थिएन एउटै खोला १२ ठाउँमा तर्नुपर्ने त्यहि कारणले गर्दा बिहान एक घण्टा भन्दा वढि समय कहिल्यै पढ्न पाईन अनि बेलुका पनि नियमित काम राती दुई घण्टा जति पढ्थे । अहिले सम्झदा तीन घण्टा मात्र पढाईको लागि कम नै हो ।
मेहनेत गर्न तर नतिजामा बढी उत्साहित र आशावादी नहुन उनको अहिलेका विद्यार्थीलाई सुझाव छ । उनि भन्छन्–“बढी उत्साहित हुँदा मानसिक असर पर्न सक्छ ।” उहिले सैद्धान्तीक विषयमा बढी जोड दिईन्थ्यो तर अहिले भने प्रयोगात्मक विषयमा जोड दिएकाले तुलनात्मक रुपमा अहिलेको पढाई ठिक भए पनि उच्च शिक्षाका लागि हुने प्रतिस्पर्धा भने अन्य कुरामा प्रभावित हुने हुदाँ अहिलेको सिस्टम ठिक नभएको उनको भनाई छ । उनि भन्छन्–“हाम्रो पालमा कसले छात्रबृद्धि पाउँछ कसले के पढ्न पाउँछ भन्ने सवै कुरा पारदर्शी हुन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो छैन ।”
यो वर्ष नतिजा अलि ढिला भयो । हुन सक्छ प्रादेशिक नतिजालाई एकैपटक सार्वजनिक गर्ने तयारीले गर्दा होला । विगत सम्झदै भन्छन् –“मेरो वेलामा मुलुकभरबाट १६ हजार २ सय २ जनाले एसएलसि दिएका थियौं । जसमा ६२ जना प्रथम श्रेणिमा र जम्मा ३६.५९ प्रतिशत मात्र उत्रिण भएका थियौ तर अहिले नो फेलको सिस्टम आएको छ । विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने उत्तम उपाय पनि हो यो ।
यो वर्ष ४ लाख ७५ हजार विद्यार्थी एसईई परीक्षामा सहभागी थिए । चैत १० गतेदेखि एक हजार ९ सय ६९ केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । यसपटक अनिवार्य विषयहरुको प्रश्नपत्र फरक फरक बनाएर परीक्षा लिइएको थियो ।
उनले कुराकानीको अन्त्यमा भने नतिजा भनेको केहि ठुलो कुरा हाईन आफ्नो तर्फवाट पुर्ण मेहनेत गर्नु पर्छ अवश्य सफल हुन सकिन्छ ।
खानेपानी चुहावट रोक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन